कामना सेवा विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २३ पुस २०७५)
चालू आव २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २८ लाख १६ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३६ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. २० लाख ६८ हजार नाफा कमाएको थियो । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ५० करोड छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ७१ करोड ९४ लाख छुट्याएको छ । कम्पनीको आगामी योजना बैंकिङ सम्भावना रहेको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा २५ स्थानमा कम्पनीले थप शाखा स्थापना गर्ने भएको छ । २५ शाखा स्थापना गरेपछि शाखा संख्या ८५ पुग्नेछ । उल्लिखितमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्र पाँचओटाको स्वीकृति प्राप्त भई निर्माणको प्रक्रियामा छ भने थप शाखा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कम्पनीले प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
2019-01-07 - 125 view(s) - abhiyan